Ravinala Airports: nahazo fanamiana ny mpamonjy voina Tanjombato - ewa.mg
News - Ravinala Airports: nahazo fanamiana ny mpamonjy voina Tanjombato
Nahazo fanamiana sy kojakoja ihany
koa ny sampana mpamonjy voina ao amin’ny kaominina Tanjombato, avy
amin’ny orinasa Ravinala Airports, mitantana ny
seranam-piaramanidina Ivato sy any Nosy Be. Avy amin’ny fikambanana
Fondation vondrona ADP (Aéroport de Paris) miara-miasa amin’ny
Aviation sans frontiers ireo fitaovana ireo, toy ny efa azon’ny
mpamponjy voina eto Antananarivo, ny any Nosy Be ary ny any
Miisa 245 ireo fanamiana ireo
miaraka amin’ny kojakoja samihafa. Nahazo fanamiana miisa 79 ihany
koa ny mpiasan’ny fahasalamana any Tanjombato. Nilaza ny talen’ny
QHSSSEIVR Ravinala Airports, Rtoa Ratsimbazafy Felana, fa tsy
mijanona hatreo ny asanay fa mitohy hatrany amin’ny maha orinasa
tompon’andraikitra ny orinasa. Adidinay ny miray hina amin’ny
fiarahamonina malagasy, toy izao fanohanana ny mpamponjy voina sy
ny mpiasan’ny fahasalamana izao.
L’article Ravinala Airports: nahazo fanamiana ny mpamonjy voina Tanjombato a été récupéré chez Newsmada.
Nivoy ny basesa: nodimandry koa i Manda Kaïamba
Ramandandrainy Razafindraleta, fantatry ny maro emin’ny sekahatry ny kanto amin’ny anarana hoe Manda. Anisan’ireo mandrafitra ny Kaïamba, izay lasa anarana tarika taty aoriana, izy. Nodimandry ny asabotsy lasa teto ity mpanakanto ity, vokatry ny fiakaran’ny tosi-dra tampoka. Nalefa notsaboina haingana tao amin’ny hopitaly ao Morafeno Toamasina ihany, saingy tsy tana ny ainy. Taorian’i Dors izay nindaosin’ny fahafatesana tsy ela akory izay, lasa ihany koa ity mpively amponga maroanaka ao amin’ny tarika Kaiamba ity. Teraka ny 4 janoary 1959 teto Toamasina i Manda, teo amin’ny faha-10 taona izy dia efa nilomano teo amin’ny tontolon’ny mozika. Maro ireo tarika efa nisy azy: Les Stars Jet , Éclair , Univers , Jupiter , Capricorne ary Farthem .Ny taona 1975 kosa izy no nanangana ny tarika Manda ex-Farthem ary taorian’izay dia anisan’ ireo mpanakanto nanao fandraisam-peo tao amin’ny trano mpamokatra Kaiamba, izay lasa anarana nisaloran’ireo mpivoy ny gadona basesa taty aoriana. Anisan’ny hira nahalalana azy ny “Nenga tsy nizaka”, “Mbola bitika”, “Samy salegy”, “Taona raiky”, … Ny marain’ny alatsinainy teo no niala ny efitrano malalaky lapan’ny Tanana tao Toamasina ny vatana mangatsiakan’ i Manda ary hoentina any amin’ny fasan-drazany ao Mahanoro. Nialoha izany, nisy ny fiandrasam-paty nataon’ireo mpanakanto namany, ka anisan’ny niaka-tsehatra nanao hira farany ho fanaovam-beloma ny andefimandriny, i Lucienne izay mpanakanto ihany koa. Nampihetsi-po ny rehetra tonga nanotrona izany.Sajo/ Zo ny AinaL’article Nivoy ny basesa: nodimandry koa i Manda Kaïamba a été récupéré chez Newsmada.
Fandrobana, fampihorohoroana, fanolanana, fandratrana… Eny, hatramin’ny vonoan’olona mihitsy aza. Nampikaikaika ny mponina any Imerintsiatosika sy ny manodidina mihitsy ity tambajotran-jiolahy, ravan’ny zandary, ity.Ny 17 oktobra lasa teo, voasambotry zandary avy ao amin’ny vondron-tobim-paritra Arivonimamo ny 10 lahy ao anatin’ity andian-jiolahy ity. Tsy nijanona hatreo fa nohalalinina misimisy kokoa ny fanadihadiana sy ny famotorana. Omaly, araka ny tatitra voaray, niampy roa hafa indray ireo voasambotra. Izany hoe, tafakatra 12 izany ireo voasambotra ary efa eo am-pelatanan’ny zandary. Fantatra nandritra ny fanadihadiana sy ny famotorana natao tamin’izy ireo avokoa ny fomba sy ny tetikady fanaon’ity tambajotran-jiolahy ity. Fantatra sy sarona tamin’izany koa ireo entana halatra maro voaroban’izy ireo tao anatin’ny iray volana, ireo fitaovana fampiasany… Anisan’izany ny basy poleta vita gasy, miaraka amin’ny “chargeurs” miisa roa sy bala miisa sivy. Ny roa lahy amin’ireto 12 voasambotra ireo koa, fantatra fa anisan’ny mpamatsy bala ireo jiolahy ao anatin’ity tambajotra ity.Heloka bevava maro…Araka ny tatitra nataon’ny kanomandin’ny Vondro-tobim-paritry ny zandary Arivonimamo, nandray an-tanana ity raharaha ity, efa amam-bolana maro tokoa ity andian-jiolahy ity ny nampitondra faisana ny mponina ao Imerintsiatosika sy ny manodidina amin’ny asa ratsiny; fandrobana mitam-piadiana, vaky trano, fampihorohoroana… Tsy vitan’izay, iharan’ny fanolanana ataon’izy ireo koa ny zaza amam-behivavy amin’izay tokantrano lasibatr’izy ireo. Raha akapoka, tena andian-jiolahy kalazalahy amin’ny heloka bevava mahery vaika tokoa izy 12 lahy voasambotra ireto.Voalaza fa nahafaly sy nahavelombolo ny vahoakan’Imerintsiatosika sy ny manodidina tokoa ny fahatrarana sy ny naharavan’ny zandary ity tambajotran-jiolahy ity. Na izany aza, tsy hijanona hatreo ny ezaka fampandrian-tany ataon’ny zandary. Tanjona mantsy ny hamongorana araka izay tratra ny tsy fandriampahalemana. Izany indrindra no mbola iantsoan’izy ireo fiaraha-mientana sy fiaraha-miasa amin’ny rehetra, tsy hilasalasa amin’ny fanomezam-baovao manoloana ny toe-javatra mampiahiahy amin’ny alalan’ny antso an-telefaonina 034 14 007 76. Manome toky ny zandary fa hijanona ho tsiambaratelo tanteraka ny mombamomba ireo loharanom-baovao.M.R.L’article Vonoan’olona, fandrobana, fanolanana, fampihorohoroana: tambajotran-jiolahy mahery vaika ravan’ny zandary a été récupéré chez Newsmada.
Tratran’ny angaredon’ny fokonolona…: matin’ny fitsaram-bahoaka i Nino, mpamerin-keloka
Matin’ny fitsaram-bahoaka ny jiolahy iray mpamerin-keloka, raindahiny, fantatra amin’ny anarana hoe Nino. Maro ireo olon-tsotra sy mpandraharaha efa nitondra faisana tamin’ity jiolahy ity…Raha ny loharanom-baovao voaray, afakomaly alina izy no maty noho ny ratra mafy nahazo azy nandritra ny fitsaram-bahoaka tao Ankirihiry Toamasina, ny tolakandron’io ihany. Araka ny fanazavan’ny polisy, jiolahy raindahiny efa nokarohin’ny polisy hatry ny ela izy ary efa matetika tratra eo am-panaovana ny asa ratsiny, saingy votsotra hatrany isaky ny tonga ao amin’ny fonjaben’Ambalatavoahangy. Miverina manohy ny asa ratsiny indray anefa izy aorian’ny fivoahany ny fonja. Malaza ratsy amin’ny fanafihana mitam-piadiana, ny fanendahana izy ary isan’ireo jiolahy ikoizana ao an-drenivohitry ny faritra Atsinanana. Ny talata lasa teo, nangalatra telefaonina finday avolenta an’ny renim-pianakaviana iray izy tao Ankirihiry Toamasina. Nisy nahita anefa ity jiolahy ity tamin’io fotoana io ka raikitra ny fifanenjehana. Samy nitsaingoka nanala ny fony tamin’ity jiolahy ity avokoa ireo olona nahita azy. Vokany, naratra mafy izy noho ny hatezeran’ny fokonolona. Tonga haingana naka azy ny polisy ka nentina namonjy avy hatrany ny Hopitalibe Toamasina. Anisan’ny mampirehareha an’i Nino ny fananany havana mahitahita izay miditra an-tsehatra mampiasa vola ka mamoaka azy tao am-ponja. Tsiahivina fa efa namono vazaha tany Sainte Marie izy ny taona 2013 raha vazaha iray hafa koa tany Toamasina ny taona 2017, manginy fotsiny ireo mpandraharaha misehatra amin’ny lavanila efa notafihiny. Vola amina tapitrisany maro ny efa azony nandritra izany.Sajo sy J.CL’article Tratran’ny angaredon’ny fokonolona…: matin’ny fitsaram-bahoaka i Nino, mpamerin-keloka a été récupéré chez Newsmada.
Nitrangana hain-trano, teny Anjanahary, afak’omaly. Efitra telo tao ambony rihana tamina trano biriky iray no nirehitra. Fantatra fa fiompiana akoho io trano io ka matin’ny faha maizana tao ny akoho maromaro. Efa voafehin’ny foko nolona ny afo, mialoha ny nahatongavan’ny mpamonjy voina. L’article Hain-trano est apparu en premier sur AoRaha.
Taona 2000 : tsy firenen-dehibe mpamo­katra kafe intsony i Madagasikara
Tsy mitsaha-mihena ny vokatra kafe eto Madaga­sikara. Tamin’ny taona 90, mbola nisy 47 000 t ny vokatra, raha 62 000 t ny vokatra ankapobeny, ny taona 80. Nanomboka ny fiandohan’ny taona 2000, vao mainka nitotongana ny vokatra, 12 900 t sisa ; ary niharatsy hatrany izany, ny taona 2015 ka hatramin’izao, tsy mihoatra ny 10 000 t. Ratsy manaraka izany koa ny kalitaon’ny kafe vokarina eto an-toerana. 3000 t sisa ny aondrana any ivelany, tsy voasokajy anatin’ny firenen-dehibe mpamokatra sy mpanondrana kafe eo amin’ny tsena iraisam-pirenena intsony i Madagasikara, na avy aty Afrika aza. Ny faritra atsinanana saika mpamokatra kafe avokoa, indrindra ny faritra Vatovavy Fitovinany,voalohany amin’ny voly kafe eto amin’ny Nosy. Avy amin’ny vokatra kafe ny fidiram-bolan’ny tokantrano 80 % any amin’iny faritra iny, talohan’ny taona 2000, saingy tsy izany intsony, ankehitriny, ny fidiram-bolan’ny maro. Antitra ny ankamaroan’ny fototra kafe, 50 taona mahery tsy misy fanavaozana, tsy misy fanohanana ny vidiny. Misy ihany anefa fa vitsy ireo mpamboly miara-miasa amin’ny mpandraharaha, manohana azy ireo. Maro amin’ny mpamboly any amin’ny faritra Vatovavy Fitovinany no mivadika any amin’ny voly jirofo, lavanila, sy fary hanaovana toakagasy.R.MathieuL’article Taona 2000 : tsy firenen-dehibe mpamo­katra kafe intsony i Madagasikara a été récupéré chez Newsmada.
Nizeria: miakatra hatrany ny vidin-tsolika ao aminy
Be mponina indrindra aty Afrika i Nizeria, manodidina ny 200 tapitrisa; mpamokatra solika be indrindra, 2,5 tapitrisa barils isan’andro, mbola maharitra 50 taona amin’ny fitrandrahana azy ankehitriny izao. Anisan’ny mahantra indrindra ihany koa anefa. Amin’izany fisian’ny solika betsaka indrindra izany, vao niakatra 15 % indray ny vidiny amin’izao fiatrehana ny fiantraikan’ny Covid-19 izao. Tsy afaka manampy intsony eo amin’ny vidiny ny governemanta. Very hevitra tanteraka ny mahantra maro anisa, mangetaheta ambonin’ny lakana.Tao anatin’ny iray volana, nitombo avo roa heny ny vidin-tsolika, ny mahantra ihany no mizaka ny vokany, ny manan-karena, tsy mihetsi-bolomaso amin’izany, raha ny nambaran’ireo miaramila mpiambina toby fivarotan-tsolika any an-toerana. Mitotongana hatrany ny toekarena any Nizeria, tafiditra lalina anaty fahantrana miaraka amin’izany ny ankamaroan’ny mponina.Raha ny fanadihadian’ireo teknisianina, mbola hiakatra hatrany ny vidin-tsolika hanentsenan’ireo kaompania vaventy mpitrandraka ny fatiantoka nahazo azy nandritra ny fihibohana. Miakatra avokoa ny vidin-javatra any Nizeria, anisan’izany ny vidin’ny herinaratra, nitombo 100 %. Voatery nanala mpiasa ny orinasa maro, hatramin’ny fanjakana. Tsy rariny intsony izao, hoy ny vahoaka nizerianina, nefa tsy afa-manoatra. R.MathieuL’article Nizeria: miakatra hatrany ny vidin-tsolika ao aminy a été récupéré chez Newsmada.
Antsahamanitra : Lola et Njakatiana en symbiose avec le public
Hier, le succès de Njakatiana et Lola a été tel, que le public a été sous le charme. Les fans, les curieux et les amateurs de “musique de variétés” ont été au rendez-vous et en redemandent. C’est dans un Théâtre de verdure Antsahamanitra bien rempli que Lola et Njakatiana ont fait des heureux hier. Les spectateurs ont pu se retrouver dans cette ambiance musicale qui a fait leur notoriété respective depuis plusieurs décennies. Le public a apprécié les chansons du répertoire de la variété malgache. Les incontournables étaient de mise. Des chansons incontournables de la playlist des inconditionnels de Njakatiana et Lola. Chaque morceau a sa propre histoire. Allant de la famille et le respect des aînés à l’amour ou la séduction aux belles parades. Evidemment, les deux crooners ont privilégié les duos. Armé de son saxophone, Njakatiana donne le ton tandis que Lola chante « Avelao aho hitia ». En totale symbiose, les chanteurs donnent un second souffle à ces morceaux tant appréciés pour produire encore plus d’euphorie auprès des spectateurs. Ayant réuni un large public, toutes générations confondues, le duo a réservé plus d’une surprise. Les invités se sont enchaînés tout au long du spectacle. Parmi les plus marquants, Inah a chanté « Mankasitraka » avec le compositeur, une nouvelle ponte de Njakatiana du temps des confinements. Un hommage entre frère et sœur, relatant l’amour fraternel qui perdure de l’enfance à l’âge adulte. Avec sa guitare, Njakatiana annonce une couleur plus folk que dans ses habitudes. Pour sa part, Lola ne lésine pas non plus sur ses tubes. Le fameux « Mila Anao aho » plus connu sous « Babonao tanteraka » jamais terni par le temps, reste un morceau très prisé et repris en chœur. Les spectateurs étaient tantôt ravis, tantôt enthousiasmés ou plutôt nostalgiques en suivant les paroles et les diverses mises en scène des groupes qui ont confirmé encore ce soir qu’ils sont des professionnels de la scène. Zo Toniaina L’article Antsahamanitra : Lola et Njakatiana en symbiose avec le public a été récupéré chez Midi Madagasikara.
Barea any ivelany: misongadina hatrany ireo mpilalao malagasy
Herinandro mahery alohan’ny handraisana ny ekipam-pirenena RD Congo etsy amin’ny kianja Barea, ao amin’ny heriny avokoa ireo mpilalao mandrafitra ny ekipa malagasy, amin’izao fotoana. Ho an’ny mpiandry tsatoby, nandresy 5 no ho 0 ry Mathias nandritra ny lalao niarahany tamin’ny PSG U-19, afakomaly. Resy tamin’ny isa 2 no ho 0 kosa, ny AS Lauhans misy an’i Adrien Melvin. Nampidi-baolina kosa i Pascal Razakanirina na Bapasy nandritra ny lalao nifandonan’ny St Pierroise sy ny Trois Bassin. Tahaka izany koa i Fabrice, izay nampidi-baolina niaraka tamin’ny ekipan’ny St Denis Fc. Etsy an-kilany, mipetraka ho tompon-toerana hatrany ry Métanire, Rayan, Mombris, Loïc sy ry Carolus any amin’ny klioba misy azy ireo tsirairay avy. Ao amin’ny tanjany tanteraka avokoa, araka izany, ireo mpilalao ny Barea amin’izao fotoana.Tsiferana R.L’article Barea any ivelany: misongadina hatrany ireo mpilalao malagasy a été récupéré chez Newsmada.
Fanohanana ny tanora: nahazo fitaovana ireo ekipan’ny fokontany any Mahareza
Notoloran’ny kaominina Mahereza, Ambohidratrimo « maillots » miisa 150 sy «baolina» miisa 13 ireo tanora manerana ny fokontany fito any an-toerana, ny alahady teo. «Tanjona ny hampiroboroboana ny fanatanjahantena sy ny kitra eto amin’ny fokontany. Ny hanomezana fialamboly ny tanora ary famaliana ny hetahetan’izy ireo izao fanohanana ara-pitaovana izao”, hoy ny ben’ny Tanàna, Rabenandrasana Mamy. Nanteriny fa tafiditra amin’ny fitaizana ny tanora handala ny firaisan-kina sy ny fihavanana ary ny fifanajana izany, araka ny nambarany. Nambaran’ny solontenan’ireo tanora nisitraka izany fanohanana izany fa zava-dehibe ho azy ireo ny hetsika tahaka izao. “Maro aminay ny te hilalao baolina kanefa tsy manana na fanamiana aza. Tsy misy baolina holalaovina koa ka isaoranay ny ben’ny Tanàna fa mbola tsy nisy nanao tahaka izao teto”, hoy izy ireo.Nanamafy izany ireo ray amandreny any an-toerana ka nilaza fa ilaina ny fanohanana ny tanora, ialana amin’ny fidorohana na koa fanitaran-kevitra rehefa tsy misy ny fialamboly sy ny fitaizana.Synèse R.L’article Fanohanana ny tanora: nahazo fitaovana ireo ekipan’ny fokontany any Mahareza a été récupéré chez Newsmada.
1 tapitrisa Ar ny saran-dalana… Tratra ireo telo lahy nampody Malagasy 53 avy any Mayotte
Voasambotry ny polisy ireo telo lahy voarohirohy ho tompon’antoka tamin’ny fampodiana an-tsokosoko ireo teratany malagasy miisa 53 niainga avy any amin’ny Nosy Mayotte.Raha ny fampitam-baovao voaray avy amin’ny polisy, nisy fitoriana momba ny lehilahy telo natolotr’izy ireo ny fampanoavana noho ny resaka fampodiana sy fanaovana tsinontsinona ain’olona avy any Mayotte ho aty Madagasikara. Malagasy miisa 53, araka izany, ireto nampodian’izy telo lahy eto Madagasikara, ny 18 septambra 2021 avy any Mayotte. Sambo iray antsoina hoe Kwassa Kwassa izay nisy mpanamory miisa telo no niala tao Antsohihy ho any Mayotte, ny 16 septambra 2021. Halaviran-dalana 200 km no vitan’izy ireo ary nakana vola mitentina 1 tapitrisa Ar isan’olona ho saran-dalana ho aty Madagasikara. Nolazain’izy telo lahy ireo fa miankina amin’ny vintana ny dian’ireto olona ireto miampita ranomasina vao ho tonga eto Madagasikara na tafita na tsia. Ireo tantsambo tsy nahitana “gilet de sauvetage” nandritra ny fanadihadiana nataon’ny polisy. Niaiky izy ireo nandritra ny famotoran’ny polisy fa nitondra olona avy any Mayotte ho aty Madagasikara.Jean ClaudeL’article 1 tapitrisa Ar ny saran-dalana… Tratra ireo telo lahy nampody Malagasy 53 avy any Mayotte a été récupéré chez Newsmada.
Handray anjara amin’ny hetsika fampahafantarana ny lalam-piofanana eny amin’ny oniversiten’Antananarivo avokoa ny toeram-pampianarana ambony sy fakiolte ao anatin’ny oniversite, ny alakamisy sy zoma ho avy izao. Misy fiovana kely ny fikarakarana amin’ity taona ity noho ny fandaminana ka tsy navondrona eo amin’ny Esplanade toy ny mahazatra ny fampirantiana fa eny anivon’ny fakiolte sy ny sekoly ambony tsirairay. Hahazo vahana koa ny nomerika ho tombony amin’ny fahitana asa haingana ka rehefa vita ny fampirantiana, mbola azo tsidihina ao anatin’ny tranonkalan’ny sekoly ambony ny tolotra fiofanana mampiavaka azy ireo avy, hoy ny fanazavana.L’article Indray mijery a été récupéré chez Newsmada.